"Izimbini ngaseLake"-indlu encinci eyonwabisayo ye-2
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguElspeth
Phinda uqhagamshelane nendalo kolu hambo lungenakulibaleka lubekwe elunxwemeni lwechibi elikhuselweyo eNew Brunswick, eKhanada, apho unokuhamba ngephenyane, i-kayak, ukonwabela ukujonga iinkwenkwezi kunye nemililo yenkampu*, kwaye uzulazule kunye kangangexesha elithile elisemgangathweni. (*imimiselo evumayo)
****Ixabiso elibonisiweyo libandakanya i-HST
Kufuphi neTrans-Canada kwabo bahamba ngeCarleton County, NB.
Qaphela ukuba le Ndlu iNcinci ithatha abantu ababini kuphela; thina, kunjalo, sivuleleke kumntwana njengomnye waba babini kwi "Two by the Lake".
Imizuzu eli-15 ukusuka kuhola wendlela iTrans-Canada, ejikelezwe ngamasimi abukekayo efama kunye neenkuni, iTiny House ihlala kwipropathi esecaleni kwechibi. Ibekwe kufutshane neFrench Fry Capital yeHlabathi, iFlorenceville (ikomkhulu lehlabathi leMcCain Foods) kunye nePotato World; Eyona Bhulorho Inde Ehlabathini, eHartland; ukutya okulungileyo (Kwi-Boardwalk), eFlorenceville; iHoulton-NB yokunqumla umda; Ukutsalwa kweTrekta yase-Centerville; Iindlela zokuHamba ngeBhayisikile iBecaguimec, eHartland; iMeduxnekeag Valley Nature Preserve, kufutshane nedolophu eyimbali yaseWoodstock, kwiDolophu yokuQala ye-NB; kunye neNtlambo yoMlambo iSaint John. Malunga neyure enye 20 imiz ukuya eFredericton, NB. **** AYIKHO iLakeville kufutshane neMoncton.
Ichibi laseWilliamstown lilungele ukuhamba ngephenyane, ukukhwela inqanawa, kunye nokuloba (enelayisensi); ayilochibi elifanelekileyo lokuqubha, ngenxa yeentaka ezininzi zamanzi kunye neentlanzi. Amachibi angaphandle kunye nangaphakathi abekwe kwi-15-20 mins drive ukusuka kwiNdlu encinci.
Ukuze uqalise ukonwabela ubumelwane, sinikezela ngeziqwenga ezi-2 zeziqhamo zexesha lonyaka (ukhetho lwethu, lwasekuhlaleni apho kunokwenzeka) kunye nebhaskithi encomekayo enesonka esimuncu sendawo (esisuka @ivenkile eSourdough), ibhotolo, kunye nobusi bendawo baseLakeville @Whalen Apiaries). Yonwabela incasa yendawo yethu entle kwaye ulungele ukuba wowed!